Hadda Kooxda Halagu Soo Celiyo Isaga- Halyayga Liverpool Ee Phil Thompson Oo Dalbaday In Coutinho La Soo Celiyo. - Gool24.Net
Hadda Kooxda Halagu Soo Celiyo Isaga- Halyayga Liverpool Ee Phil Thompson Oo Dalbaday In Coutinho La Soo Celiyo.
Kubbad sameeyaha kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Philippe Coutinho ayaa si xun ugu fashilmay riyadii uu ka lahaa Camp Nou wuxuuna hadda colaad kula jiraan jamaahiirta kooxdiisa Barca.
Kadib markii uu si xun oo muran ku jiro kaga baxay Liverpool isla markaana uu iska diiday in uu kooxda Jurgen Klopp u ciyaaro, Coutinho ayaa hadda bacsad ku ah Camp Nou halkaas oo uu orin kala kulmayo jamaahiirta kooxdiisa Barca.
Laakiin halyayga Liverpool ee Phil Thompson ayaa aaminsan in hadda ay Liverpool dib u soo ceshato xidiga reer Brazil inkasta oo ayna taasi ahayn firkrad ay jamaahiirta Reds soo wada dhaqayn karaan.
Qaaybii uu Coutinho kaga baxay Anfield iyo warqadii bixitaanka ee uu maamulka kooxdiisa u gudbiyay ayaa wali ah wax wayna jamaahiirta Liverpool ilaawin waxayna in badan oo ka mid ahi ku faraxsan yihiin fashilka soo gaadhay xidiga reer Brazil.
Phil Thompson oo taariikh wayn ku leh Liverpool ayaa sheegay in isagu uu hadda soo ceshan lahaa Coutinho oo uu waliba u soo celin lahaa isaga oo uu wadnuhu garaacayo.
Phil Thompson oo Coutinho ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaan isaga ku soo ceshan lahaa wadno garaac, laakiin waaa in ay hadda noqonto. Ma doonaysid in aad 12 bilood oo kale ka baxdid, waxaan filayaa in uu wali awood leeyahay.”.
Phil Thompson oo sababaha uu Coutinho ugu fashilmayo Barca ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxa uu isagu ku dhibtooday Barcelona. Waxaynu aragnay isaga oo garabka bidix ka ciyaaraya, isagu Neymar ma aha”.
“Isagu garabka bidix ma aha, halkaasina waa goobta uu Barcelona uga ciyaarayo, iyagu uma jecla isaga sidii ay Liverpool u jeclayd” ayuu Phil Thompson hadalkiisa sii raaciyay.
Laakiin taageerayaal badan oo Liverpool ah ayaa Phil Thompson ku raacsan in Anfield lagu soo celyo Philippe Coutinho kaas oo hadda u baahan dariiq uu kaga baxsado orinta iyo culayska badan ee ka soo haystay saxaafada Spain.
Coutinho ayaa ilaa hadda ah xidiga taariikhda Barcelona ugu qaalisan laakiin waxa uu awoodi kari waayay in uu u cudur daaro lacagtii waalida ahayd ee uu Anfield kaga baxay iyada oo hadda shaki wayn la galinayo mustaqbalkiisa Camp Nou.
Haddaba akhriste, haddii aad taageere u tahay Liverpool, miyaad Phil Thompson ku raacsan tahay in Coutinho hadda dib loogu soo celiyo Anfield?
Haa ha la soo celiyo raali galina ha bixiyo…
Hassan N Hassan says:
Maya kuma raacsani Liverpool iyadoo laga jecel yahay asagaa katagay
Maya kuma raacsani coutinho Liverpool iyadoo laga jecel yahay isagaa katagey hada looma baahna
Haa Halaso Cesho Raali GaLina Ha Bixsho Waayo Kubad Sameye Liverpool Way UbahanThy Isagana Ku Fican Boskas Ynwa
Haa halaso celiyo liverpool way ubaahantahay hal abuur weerarka dhexda kaso dhisa isna waa ubaahanyahay koox aaminta kana ciyaar siisa booskiisi ka taagera ahan wali xushmad ayan uhaya coutinho
Libaaxa Raaso DDS says:
Haa Hala sooceliyo Waa Geesi Hunguribaa Naga aqaady kkkk